Mee ka usoro Google metụtara Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Oge a ka anyị chọrọ ịgwa gị gbasara Mee ka usoro Google gharii metụtara e-commerce.
1 Gịnị bụ Google rụọ ọrụ?
2 Kedụ ka m ga-esi nweta ọrụ Google n'ọrụ?
3 Gịnị bụ ọrụ ahụ?
4 Ihe Nlereanya nke rụọ ọrụ ọmụmụ: E-Azụmaahịa
4.1 Mbido mbụ - Nkọwa nke azụmahịa kọmputa
4.2 Nke abụọ modul - ofdị kọmputa electronic
4.3 Nke atọ modul - lọjistik na nkesa
4.4 Anọ modul - Netwọk mmekọrịta etinyere na kọmputa azụmahịa
4.5 Usoro nke ise - Azụmahịa ekwentị
4.6 Nke isii - Mgbasa Ozi Dijitalụ
4.7 Usoro nke asaa - Njin ọchụchọ Google
4.8 Asatọ modul - ndị ọzọ search engines
5 Kedụ ka Google si arụ ọrụ ọmụmụ ihu na ihu na-arụ ọrụ?
Gịnị bụ Google rụọ ọrụ?
Ọ bụ isi ihe ụlọ ọrụ na-ebu n'uche iji nye ndị chọrọ ọzụzụ ọrụ ọzụzụ. Site na usoro mmemme na usoro ọmụmụ na-enweghị ego, ndị nwere mmasị nwere ike ịmụ usoro dị iche iche, nka, yana nweta ihe dijitalụ.
Iji nye ihe omuma a nile, Google soro mahadum di iche iche di na Spain na Europe dum. Ihe ikpo okwu a nke Google kere nyere ndi nwere mmasi aka inweta asambodo n'efu na asambodo, ya na inyocha dijitalụ. Ọbụghị naanị nke ahụ, enwere ike ịme ihe niile enwere na ntanetị, ọ bụ ezie na a na-enyekwa nhọrọ nke ihu na ihu ihu, n'etiti nke ọmụmụ E-Commerce, usoro ịzụ ahịa ahịa dijitalụ, yana usoro nyocha data pụtara.
Kedụ ka m ga-esi nweta ọrụ Google n'ọrụ?
Ọ na-abụkarị nke mmadụ Google rụọ ọrụ n'elu ikpo okwu ị nwere ike ijikwa usoro niile achọrọ iji nweta mmemme ọzụzụ dị iche iche. Site na Google rụọ ọrụ peeji ị nwere ike ịnweta ozi niile achọrọ iji debanye aha maka usoro ọmụmụ ọ bụla dị.
Dịka e kwuru n'elu, enwere ike ịnweta usoro mmụta ndị a n'ụdị usoro ọmụmụ n'ịntanetị ma ọ bụ ihu na ihu, nke a na-akụzikarị na obodo a dịka Madrid, Seville, Barcelona, ​​Salamanca, Zaragoza, Valencia, Alicante , Granada, Murcia, na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, onye ọ bụla nke E kewara usoro nkuzi enwere na modulu dị iche iche nwere ihe dị ka elekere 40 ọ bụla.
Gịnị bụ ọrụ ahụ?
Mgbe ịnweta ndị nkuzi sitere na Google rụọ ọrụIhu ọma ihe niile achọrọ bụ ịnweta ịntanetị ma nwee akaụntụ Google. Nke a bụ ihe dị mkpa iji nwee ike ịhọrọ ma debanye aha maka usoro ọzụzụ dị iche iche.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọtụtụ n'ime ọmụmụ ihe ndị dịnụ na-ekewa n'ime modulu ka ndị sonyere nwee ohere ịtụle ọganihu ha. Tụkwasị na nke ahụ, a na-enye ihe omume ndị ọzọ ma ọ ga-ekwe omume ịgafe ule tupu ịnweta usoro ọzọ, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ka nwa akwụkwọ jiri 75% zaa ule niile.
Ọ dịkwa mkpa mezue ọdịnaya niile nke modulu ahụ tupu njedebe nke afọ, na mgbakwunye na ịme ule ikpeazụ maka usoro ọ bụla ka ịnwere ike ịnweta asambodo gọọmentị.
Ihe Nlereanya nke rụọ ọrụ ọmụmụ: E-Azụmaahịa
Maka ndị nwere mmasị na azụmaahịa eletrọniki, enwere nkuzi ọrụ enyere na n'elu ikpo okwu a bara ezigbo uru ịghọta etu E-azụmahịa si arụ ọrụ, atụmatụ ịgbaso na ọtụtụ isiokwu metụtara ya. Dịka ọmụmaatụ, usoro E-Azụmaahịa dị ugbu a nke kewara n'ime 8 modul.
Mbido mbụ - Nkọwa nke azụmahịa kọmputa
Usoro a na-amalite site na iwebata azụmaahịa e-commerce, nyocha, yana omume kachasị mma nke Benchmarketing. Isiokwu nke usoro CANVAS, okike nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, nchekwa data, nchekwa data, yana ojiji nke usoro LEAN, a na-emetụtakwa ọnụọgụ nke azụmaahịa ndị dị na ibe weebụ na ihe ọmụma.
Nke abụọ modul - ofdị kọmputa electronic
Usoro a na-ekpuchi isiokwu ndị dị ka B2B veso B2C, ngwaahịa dijitalụ, multiplatform, ịnye ọnụahịa, ọgba aghara, ụlọ ahịa, na mgbakwunye na ịmekọrịta nyiwe azụmaahịa maka mgbasa ozi nke ọ bụla, ịzụta ma ọ bụ ịzụrụ ego, azụmahịa na Kupọns., Yana ndị ntanye.
Nke atọ modul - lọjistik na nkesa
Na modul a, ụmụ akwụkwọ na-amụta banyere lọjistik na Ecommerce, nloghachi, mbupu mba ụwa, nkesa nke ngwaahịa dijitalụ, nkesa nke ngwaahịa anụ ahụ, yana nkesa nke ngwaahịa agwakọtara. Ha ga-amakwa ihe niile metụtara mmachi iwu, ụtụ isi, onyinye dị na mpaghara, yana ịba ọgaranya na mkpebi esemokwu.
Anọ modul - Netwọk mmekọrịta etinyere na kọmputa azụmahịa
N'okwu a, ọ bụ modulu na-ekwu maka ụdị netwọkụ mmekọrịta dị adị, gụnyere Facebook, Twitter, LinkedIn, yana ihe a ga-eme na ụlọ ahịa na netwọkụ mmekọrịta, netwọkụ echiche na azụmaahịa na netwọkụ mmekọrịta. Ha ga-enwe ike ịmata ihe nje virus pụtara, netwọkụ mmekọrịta nke onyonyo na Instagram, yana mmetụta nke egwuregwu na netwọkụ mmekọrịta Foursquare, WAZE.
Usoro nke ise - Azụmahịa ekwentị
Usoro a na-ekwu maka nchịkọta nke ụdị azụmaahịa, ụdị ego dị iche iche, ọdịnaya, njem, ojiji na ekwentị mkpanaaka, ịre ahịa na ngwaọrụ mkpanaka, ngwa na webapps, eziokwu dịwanye elu, yana ndị na-azụ ahịa.
Nke isii - Mgbasa Ozi Dijitalụ
Usoro Ecommerce a na Google rụọ ọrụ gụnyekwara modulu ebe ị nwere ike ịmụ ihe niile gbasara ahịa email, mmemme mmekọ, ngosipụta ọkọlọtọ, Google AdSense, kuki ndị na-emegharị, atụmatụ mgbasa ozi, mgbasa ozi vidiyo n'ịntanetị, yana oke mmejọ ndị kachasị na ahịa email.
Usoro nke asaa - Njin ọchụchọ Google
Nke a bụ usoro na-adọrọ mmasị n'ime usoro ahụ ebe ọ na-akọwa n'ụzọ zuru ezu etu Google, auctions, SEM na SEO si arụ ọrụ, na mgbakwunye na ịkọwa isi ngwaọrụ SEO dị, ọbụlagodi na-ekwu maka Colibrí algorithm ọhụrụ.
Asatọ modul - ndị ọzọ search engines
Nke a bụ usoro ikpeazụ nke usoro Ecommerce na Google rụọ ọrụ yana nke ihe niile metụtara ọrụ ọchụchọ na Twitter, ọrụ ọchụchọ na LinkedIn, yana ọrụ ọchụchọ na Facebook kọwara. A na-ahụkwa isiokwu nke adwords Google, ASO, nnukwu data metụtara Ecommerce, yana ọchụchọ ndị emere site na ngwaọrụ mkpanaka.
Kedụ ka Google si arụ ọrụ ọmụmụ ihu na ihu na-arụ ọrụ?
Obi abụọ adịghị ya na ọzụzụ nkuzi nke Google nyere Ha bụ ezigbo ụzọ ọzọ maka ndị niile na-achọ ịbanye n'ime ọrụ ọrụ. Usoro ndị a, na mgbakwunye na ịnwe n'efu kpamkpam, dị na ihu ihu na ihu na ntanetị.
N'ihe banyere Usoro ihu na ihu, Ndị a mejupụtara mmemme ọzụzụ abụọ n'efu. Ọzụzụ achụmnta ego chọrọ inweta ihe ọmụma dị mkpa ka mmadụ wee nwee ike ịrụ ọrụ dị ka onye ọchụnta ego. Ọ na-elekwasị anya na onye ọrụ, ìgwè na nsonaazụ ya. Ọzụzụ ọzụzụ a dịịrị awa iri abụọ na otu.
Enwekwara a ahịa dijitalụ nke gunyere asambodo nke Bureaulọ Ọrụ Na-akpọ Mgbasa entanetị. N'okwu a, ọ bụ usoro ga - ewe awa iri anọ na nke ụmụ akwụkwọ na - arụ ọrụ dị ka ndị otu nwere ọkachamara ọkachamara. N'ime usoro a ụmụ akwụkwọ nwere ike ịmụ maka SEO, SEM, nchịkọta weebụ, Ecommerce, yana netwọkụ mmekọrịta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Mee ka usoro Google metụtara Ecommerce rụọ ọrụ